……….မြန်မာတွေ ကုလား လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ကြတာလဲ…….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ……….မြန်မာတွေ ကုလား လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ကြတာလဲ……..
……….မြန်မာတွေ ကုလား လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ကြတာလဲ……..
Posted by koyinmaung on Jun 5, 2012 in Copy/Paste | 51 comments
ကုလားဆိုတဲ့ စကားနဲ့ပါတ်သက်ပြီးတော့မူကွဲနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ကုလားဆိုတဲ့ စကားဟာ သင်သက်ကရိုက်ဘာသာ ကုလကနေ လာတယ်လို့တချို့က ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ကုလကနေလာရိုးမှန်ရင်တော့ အမျိုးအနွယ်အသင်းအပင်း ဒါမှမဟုတ် ဇက်(Z)ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးလို့ယူဆဖွယ်ရာရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီမူကို ဆရာဦးဖိုးလတ်ကတော့ လက်မခံပါဘူး။ ဆရာဦးဖိုးလတ်ကတော့ တူရေနီယံ ဘာသာအုပ်စုကနေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တူရေနီယံဘာသာအုပ်စုများမှာ– တိဘက်၊ မွန်ဂို၊ ဂျပန်စကားတွေပါဝင်ပါတယ်။
တိဘက်ဘာသာမှာ ကလ ဆိုတဲ့စကား မွန်ဂိုစကားမှာကရဂျင်း ဆိုတဲ့စကား ဂျပန်စကားမှာကုအိုက်
ဆိုတဲ့စကားတွေဟာ ကုလားဆိုတဲ့စကားရဲ့မူလအရင်းအမြစ်တွေဘဲ လို့ ဆရာကြီးဦးဖိုးလတ်က
ဒီအယူအဆချက်အရဆိုရင်တော့ ကုလားဆိုတာဟာနိုင်ငံခြားသား ဒါမှမဟုတ် အသားမဲတဲ့လူဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်နှစ်မျိုးထွက်ပါတယ်။ဆရာဦးဖိုးလတ်ကတော့ နိုင်ငံခြားသားတိုင်းကို ဗမာက ကုလားလို့မခေါ်
ပဲ အသားမဲတဲ့အိန္ဒိယတိုင်းသားကို ကုလားလို့ခေါ်ပြီး အဲ့ဒီကုလားနဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာတံတွေဆင်တူတဲ့
ဥရောပတိုက်သားတွေကို ကုလားဖြူလို့ခေါ်ကြတဲ့အတွက် ကုလားဆိုတာဟာ နိုင်ငံခြားသားကို
ကုလားဆိုတာဟာ အသားမဲတဲ့လူကိုခေါ်တဲ့အခေါ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချ
bbc မှာကုလားဆိုတဲ့စကားကိုရှင်းထားတဲ့အလင်္ကာပုလဲပန်းကဏ္ဍမှာ တွေ့လို့ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒါကိုကြည့်ယင် ပါကစ္စတန် ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံတွေဟာတချိန်က
အိန္ဒိယနိုင်ငံပြည်နယ်တွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာတွေက ဟင်ဒူကုလား မွတ်ဆလင်ကုလားရယ်လို့
ကုလားလူမျိုးလို့ခေါ်ခဲ့တာကလဲ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး ရှေ့ရှင်ဘုရင်တွေလက်ထက်ထဲကခေါ်ခဲ့တဲ့
အော် ကိုရွှေကုလားများ ခက်ပါ့…..
မည်သို့ ပင်ခေါ်ဝေါ်စေကာမူ. ကျနော့အမြင်ကတော့. အားလုံးအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့
ကြပြီးမှ. အခုမှထပ်ပြီး သွားနေတဲ့လမ်းကြောငးကိုနောက်ပြန်လှည့်အောင် အားမပေး
တကယ်တော့ ကုလား ဆိုတာလည်း ပညတ် ..
မြန်မာ ဆိုတာလည်း ပညတ် ..
တရုတ် ဆိုလာလည်း ပညတ် …
အံစာတုံး ဆိုတာလည်း ပညတ် …..
ငဗိုက် ဆိုတာလည်း ပညတ် ..
ဗြဲသီး ဆိုတာလည်း ပညတ် …..
ဒါတွေကို နားမလည်တဲ့ ဒီပုထုဇဉ်လူတွေကြားမှာ မနေချင်တော့ဘူးကွာ ..
တောထွက်တာက ကောင်းတယ် … တွမ် …
ရာသက်ပန် ဆွမ်းပဒေသာပင်စိုက်ထူပေးပါ့မယ် ဖျာ့
အသားကတော့ မဲတာမှ မှောင်နေတာပဲ
နေ့ ခင်းကြောင်တောင် မိုးချုပ်နေတဲ့ကောင်
အဓိကကတော့ မဲတာနဲ့ ကလားပဲခေါ် ချင်နေကြတယ်..လို့ ထင်တာပဲ..ပြဿနာက
ရှေးကတဲက ခေါ်လာကြသမို့ခုမှ ပြင်ခေါ်ဖို့ မလွယ်.
တစ်ခုရှိတာက ကွယ်ရာမှာပဲ အခေါ်များတာပါ
မြန်မာကောင်၊တရုတ်ကောင်၊ ကလားကောင်၊ ရှမ်းကောင် ဘာညာပေါ့.
ရှေ့ မှတော့ မခေါ်ကြပါဘူးနော်..
အူးဗိုက် အတွက်နာမည်ရပါပီဗျို့တရုတ်မဲ—တရုတ်မဲ. ပေါ့။
ယနေ့ မှ စရွေ့ ၊ အဆိုပါ ကုလားများ ကို
အထူးသဖြင့် / အထီးများသည် မွေးရာပါသောင်းကြမ်းလွန်းသောကြောင့်
““ ကလီး လို့ ခေါ်စေဗျား ””
ရွှေညဏ်တော် စူးရောက်ပါဂျောင်း ..
အရှင်မင်းလိ ဖလား …
ဒါစို တရုတ်နဲ့ကုလား မခေါ်ပဲ လရှုပ်နဲ့ကလီး ပဲ ထှော်လော့မယ် ။
မြန်မာတွေက မွန်ဂိုတရုတ်တွေကို တရုတ်တရက် တွေလို့..ခေါ်တယ်ဆိုဘဲ
အဲ့ဒီကနေ တရုတ် ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ပေါ်လာတယ်တဲ့
တရုတ်တရက် ဆိုတာ နှောက်ရှက်ဖျက်ဆီးသူ ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေးလုပ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်တဲ့ဗျာ…
ငယ် ငယ် တုံး က ဆ ရာ မ ပြော ပြ ဒါ က တော့ ၊
မွန် ဂို တွေ ရဲ့ မြင်း တပ် ဖွဲ့ ဟာ သိပ် မြန် ဆန် လွန်း လို့ ၊ ဗ မာ ပြည် အ တွင်း သို့ ရုတ် တ ရက် ရောက် လာ လို့ ၊ တ ရုတ် တ ရက် က နေ တရုတ် ဖြစ် သွား တယ် လို့ သင် ခဲ့ ရ တယ် ။
စ ကား မ စပ် ၊
ကု လား နဲ့ ပဲ ၊ သေ မှ ကွဲ ဆို ရိုး ရှိ ပေ မည့် ၊
ကျ နော် မျိုး ကု လား မ ဟုတ် တဲ့ တ ရုတ် ကြီး လဲ ၊
ပဲ ဆို အ ရမ်း ကြိုက် ၊ အ ထူး သ ဖြင့် “ ပဲ ရာ ဇာ ” ။
အခေါအဝေါက အရေးမကြီးပေမယ့် ဖြစ်သမျှအားလုံး ဥပေဒေအတိုင်းဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ
ကုလားဖြစ်ဖြစ်၊ ဗမာဖြစ်ဖြစ်၊ တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အခေါ်အဝေါ်ကဘာအရေးလဲဗျာ၊ ယဉ်ကျေးမူတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ ဖေးဖေးမမ၊ တန်းတူရည်တူ၊ အတူနေထိုင်သွားကျရင်ဖြင့် အရာအားလုံး ငြိမ်းချမ်းနေမှာပါဗျာ။
မြန်မာတွေဘာကြောင်ကုလားလို့ ခေါ် လဲဆိုတော ၇ွာသားတွေလဲသိမျင် နေကြမှာပါ တဖက်နိုင်ငံ ကနေ မြန်မာပြည်ကို ကူးလာလို့ ဘဲ
ဒီလိုနဲ့ကာလ၇ှည်ကြာလာတော့ ကူးလာကနေ ကုလား လို့ဖြစ်လာတယ် ဆိုပြီးေ၇ှတုံးက ကျောင်းဆ၇ာတယောက် ကကိုးကားပြောဆိုတာကို ကျွန်တော ကြားဘူးလို့ မှတ်ထားတာလေးပါ မှန်ဘို့ကတော့ ၇ာနှန်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်
min htwe says:
ကျုပ်တို့ရွာမှာတော့ အသားမဲတဲ့လူကို ဘာလူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် ကလားလို့ခေါ်ကြတယ်ဗျ
အသားဖြူတဲ့သူကိုလည်း ဘာလူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် တရုပ်လို့ခေါ်ဂျဗျန်ရော
( ဝေဖန်နိုင်ဘို့ အခြေခံသဘောလေးဘာ )
တစ်ခါ ဘယ်သူလည်းသိဘူး ဒီဆိုဒ်ထဲမယ် ပြောဘူးဒယ်
ကျုပ်တောင် မှတ်စုလေးတစ်ခုလုပ်ဘို့ ပြန်လိုက်စာနေဒါ မတွေ့သေးလို့
အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ အသားမည်း(ဟိန္ဒူဘာသာဝင်)တွေကို Keling ကလိင် (မြန်မာအခေါ် ကလယ်/ကုလား) လို့ ခေါ်ကြတယ်..
ကုလားတရုပ်ဗမာရှမ်းလို့ မြင်ဖို့ထက် လူကို လူလို့မြင်ဖို့သာ အဓိကလို့ ထင်ပါကြောင်း။
ထို့အတူ လူဖြစ်ပေမယ့် တိရိစ္ဆာန်အသိရှိသူကို လူတိရိစ္ဆာန်လို့ မြင်ဖို့လိုကြောင်း..
လူဖြစ်ပြီး အမြဲလိုနေပြီး ပူလောင်နေတဲ့ လူပြိတ္တာကိုလဲ လူ့ပြိတ္တာလို့ မြင်ဖို့လိုကြောင်း..
လူဖြစ်ပြီး ဒေါသတွေ အားကြီးပူလောင်နေသူကို လူ့ငရဲသားလို့မြင်ဖို့လိုကြောင်း..
ကုလား တရုပ်. ဂျပန် လို့မြင်ဖို့ထက်… လူကို လူလို့မြင်.. လူ့တိရိစ္ဆာန်ကို လူ့တိရိစ္ဆာန်လို့မြင်..
လူ့ငရဲသားကို လူ့ငရဲသားလို့မြင်.. လူပြိတ္တာကို လူပြိတ္တာလို့မြင်တာကသာ လူကို ပိုပြီး အကျိုးရှိနိုင်မည် ထင်ပါကြောင်း…
မိမိကိုယ်ကိုယ်လဲ … လူလား.. လူ့တိရိစ္ဆာန်လား.. လူ့ပြိတ္တာလား.. လူ့ငရဲသားလား.. ဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားပြီး ဆင်ခြင်ပြီး မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုမည်ထင်ပါဂျောင်…
ဟုတ်တယ်နော်…ဦးဗိုက်…. အင်း….. ဟုတ်တယ်နော် ဦးပေ… yess
အယ် ….. သူဟာသူပြောပီး သူ့ဟာသူထောက်ခံတွားဒယ်
သူတို့ချင်းတောင် ကုလားလို့ ပြန်ခေါ်နေတာပဲ
ကုလားဆို = မဆလာလို့ခေါ်မယ်…
တရုတ်ဆို = ပဲငံပြာရည် ခေါ်မယ်…
ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်ကို သွားသွား သတိရနေသား…
အင်း..တူက မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ လည်း မထော်ကြနဲ့ ပေါ့ကွယ်….:D
ask the people which they called kalaa they like this word or not. 100 out of 100 people don’t like them to called kalaa. so this is discriminating words. any one have good sence they won’t use this word. the authority need to take action like other country if any one discriminate other people. then only country will develop like other country.
ကာယကံရှင်တွေက.. မကြိုက်ရင် မခေါ်ဖို့ပါပဲ..
မကြိုက်ပါဘူးဆိုတာကို ခေါ်တာ..(ဒါမှမဟုတ်) ခေါ်ဖို့ကြိုးစားအကြောင်းပြတာဟာ.. မျှတတဲ့.. ဖြစ်တည်မှုမဟုတ်ပါဘူး..
တရားမျှတတာကိုချစ်ရင်.. ကိုယ်တိုင်ကလည်း.. တရားမျှတရပါမယ်..
ကာယကံရှင်(အိန္ဒိယသားတွေ)(အများစု) တကယ်ကို ကြိုက်မကြိုက်..
ကျမ စာလိုက် သင်တုန်းက မူဆလင် တပည့် လေးတွေ တော်တော် များများ ပါဖူးတော့မူဆလင် အိမ်တွေ အ၀င်အထွက် ရှိဖူးတယ် ပြောရမှာပေါ့။ သူတို့က သူတို့ကို သူတို့ ကုလားလို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ ဟိန္ဒူ ကုလားတွေ ကိုမှ သူတို့ က ကုလားလို့ပြောတာ။
ကျမတို့ ၁၀ တန်း မှာ ပါခဲ့တဲ့ မြင်းမှာ အုန်းခွံ၊ ကျွန်မှာကုလား၊ ဓါးမှာ မိုးကြိုး ဆိုတဲ့ကဗျာစာသား အတိုင်းဆိုရင် ကုလားဆိုတဲ့ စကားလုံးက အဲဒီ ခေတ်ထဲက ရှိခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် မူဆလင် လား ၊ဟိန္ဒူ လား ဆိုတာတော့ မသိဘူးပေါ့။
၅.၆.၂၀၁၂ ထုတ် မနေ့က မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ..
တောင်ကုတ်မြို့တွင်. ……မွတ်ဆလင်ကုလား ၁၀ ဦးအသတ်ခံရ
ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းပါလာပါတယ်..မွတ်ဆလင်ကုလား၁၀ ဦးဆိုတဲ့နေရာမှာ
မွတ်ဆလင်အမျိုးသား ၁၀ဦး သော်လည်းကောင်း
ကုလားဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို သူတို့အများစုက
ဘယ်လိုနည်းနှဲှ့မှ မကြိုက်မှာကတော့ အသေအချာပါပဲ..
နောက်တခုက အခုလို လူမျိုးရေးအရ အထိအခိုက်မခံနိုင်သေးတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာတော့ ..
အရေးအသား အပြောအဆို ဆင်ခြင်ထားပေးလိုက်ရင် မမှားလောက်ပါဘူး..
အမလေး… ကုလားလို့ ခေါ်တာလေးများ နာရတယ်လို့.. ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်တာဗျနော်… လူဟားဆို တိုင်းရင်းသား စစ်စစ်၊ မောင်နှမတွေထဲမှာ အသားအမဲဆုံးမို့ မိဘတွေရော၊ သူငယ်ချင်းတွေရော၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတိုင်း ကုလား လို့ခေါ်တယ်ဗျ.. နာပါဘူး.. လူဟား ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆို ရှမ်းကုလား၊ ရခိုင်ကုလား၊ ဗမာကုလား စသဖြင့် နံမယ်တွေ စုံလို့…. ဘယ်သူမှ မနာကြပါဘူး….
ကုလားထက်ဆိုးတဲ့ နံမယ်တွေ တို့ရွာထဲမှာ ပေါလွန်းလို့ … ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ကို ခံယူထားကြတာ.. ဥပမာဗျာ.. ကြီးမိုက်၊ ငပေ၊ ကိုကိုကြောင်တို့ ဆိုကြည့်ပါလား.. ပြောလိုက်အုံးမယ်ဗျ… အီးတုံး ဆိုတာတောင်ရှိသေးတယ် နော့လေ… (ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်တာပါခင်ညာ)
ရှေးမြန်မာတွေ ကော်ကေးရှန်းအဖြူတွေကို ကုလားစာရင်းထဲထည့်တာ ဟိုးအရင်ထဲက အိန္ဒိယတိုက်မှာ လူဖြူတွေ ကိုလိုနီချဲ့ စီးပွားလုပ်တဲ့ အစဉ်အလာ ရှိထားလို့နဲ့တူတယ်။ တူရကီ၊ ပါရှား အာရပ် ဂရိ ခေါမ စတဲ့ ရှေးအင်ပါယာတွေအားလုံး အိန္ဒိယတိုက်ငယ်နဲ့ နယ်မြေချင်း ဆက်နေဂျဒယ် မဟုတ်လား။ အဲဒါနဲ့ပဲ သူတို့ကို ကုလားမျိုးတမျိုးအဖြစ် အစဉ်အလာ သတ်မှတ်လိုက်ပုံရဒယ်။ ကျုပ်တို့သဂျီးလည်း ခေသူမဟုတ် ဘင်လာဒင်နဲ့ အမျိုးတော်သဒဲ့။။ သူ့နာမည် မူရင်းအပြည့်အစုံဂ အိုစမာဒင် ခိုင်လာဒင် ဆိုဘဲ။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရ သတင်းစာထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အရေး အသားအချို့နှင့် ပတ်သတ်လို့ မကျေနပ်သံတွေ ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့် အစိုးရဘက် က ပြန်လည် ပြင်ဆင် ပေးသွားဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန ရဲ့ တာဝန် ရှိသူ တဦးက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုအသုံးအနှုန်းနဲ့ ပြင်ဆင်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဆွေးနွေးနေဆဲ လို့ ပြောပါတယ်၊ ဒီအကြောင်းကိုတော့ မသင်းသီရိက ပြောပြပေးမှာပါ၊
ဇွန်လ (၅) ရက် အင်္ဂါနေ့ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာတွေထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖော်ပြတဲ့ သတင်းထဲ မူစလင်ကုလား ၁၀ ဦးအသတ်ခံရဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်း အစား ပြည်တွင်းနေ အစ္စလမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ၁၀ ဦး အသတ်ခံရ ဆိုပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖတ်ရှု့ဖို့  ဆိုပြီး ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဆိုက်စာမျက်နှာမှာ အမှားပြင်ဆင်ချက် ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်၊
ဒီအသုံးအနှုန်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်ကို လည်း မနက်ဖန် ဇွန်လ ၆ ရက် ထုတ် သတင်းစာတွေထဲ ထည့်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ပြည်သူဆက်ဆံဦးစီးဌာနရဲံ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲထွဋ်ကပြောပါတယ်၊
“သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ ဘာသာနဲ့ လူမျိုးရဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ကျနော်တို့ ဒီနေရာမှာ ထပ်မသုံး ချင် ပါဘူး။ ဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ပြန်ပြင်ဖို့ပါ။ မနက်ဖန်ထွက်မယ့် သတင်းစာတွေမှာ ကျနော်တို့ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖော်ပြဖို့ ရှိပါတယ်။ အသုံးအနှုန်းကတော့ သတင်းတပုဒ်မှာ သေဆုံးတဲ့ သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးသားလိုက်တာမှာ ကျနော်တို့က မှုခင်းအစီရင်ခံစာမှာ ပါတဲ့အတိုင်း ရေး လိုက်တာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်၊ ထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကျနော်တို့ ပြန် ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ သတင်းနဲ့ စာနယ်ဇင်းက တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင် ဖော်ပြပေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ် ခင်ဗျ။”
ဇွန်လ ၃ရက် တနင်္ဂနွေနေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်က နေရာ ၃ခုမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ သတင်းကို ဖော်ပြဖို့ အချိန်အတိုင်းအတာအရ ခက်ခဲမှုတွေဖြစ်သွားပြီး စီစစ်တာတွေမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့လည်း ရှင်းပြပါတယ်။
“တစ်ကတော့ ကျနော်တို့မှာ ဒါကို ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ ၈နာရီသတင်း ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ အပြည့်အစုံ ရတဲ့အချိန်နဲ့ သတင်းထုတ်ရမယ့်အချိန်နဲ့က ကပ်သွားတော့ သူတို့ ကမန်းကတမ်း နဲ့ တော်တော် မြန်မြန်လေး ကျနော်တို့ ရေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သတင်းတောင်မှ ကျနော်တို့က အစပိုင်းမှာ မထည့်နိုင်ဘဲနဲ့ သတင်းကြေညာတာ ပြီးကာနီးမှ ထည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ရေးတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ သေချာ ပြန်ပြီးတော့ စိစစ်ဖို့ အချိန် လုံလောက်စွာ မရလိုက်ဘဲနဲ့ ခုန မူလ ရထားတဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေမှာ ပါတဲ့ စာသားတွေအတော်များများကို သွား သုံးလိုက်မိတဲ့သဘော ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ချက်ချင်းဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကို ထုတ်တဲ့အခါမှာ အတွေ့အကြုံ သိပ်မရှိသေးတော့ ထုတ်တဲ့အခါမှာ ချို့ယွင်းချက် အားနည်းချက်တွေတော့ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ”
အခုပြန်ကြားရေးက နောက်ဆုံးသိထားတဲ့ အခြေအနေတွေကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ တည်ငြိမ်မှု ရှိနေပြီးတော့ နောက်ထပ် ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်ရအောင် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသ အာဏာပိုင် တွေက ထိန်းသိမ်းဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်၊
“ခုချိန်ထိတော့ ကျနော်တို့ သတင်း ထပ် ထုတ်ပြန်ဖို့ မရှိသေးပါဘူး။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် ၀ိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာလောက်ပဲ ကျနော်တို့ သိပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ သတင်းထဲ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပေါ့ဗျာ.. ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို ကျောက်နီမှော်ကိစ္စမှာတော့ တရားခံလို့ ယူဆရသူ တွေကို မိ ထားတာ ရှိပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ စုံစမ်းဆဲကိစ္စမို့ အသေးစိတ် မသိရသေး ပါဘူး။ သို့သော် သတင်းစာ ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဒါတွေကတော့ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တရားဥပဒေနဲ့ အညီ သက်ဆိုင်ရာက ဆက်လက်ပြီးတော့ အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျနော်တို့ လက်ထဲကို ရောက် လာတဲ့ သတင်းအားလုံးကိုတော့ ကျနော်တို့ ချက်ချင်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပဲ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ သတင်း ထုတ်ပြန်ဖို့ ရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ Website မှာလည်း မနေ့က ညနေပိုင်းကတည်းက စပြီး တော့ အသိပေးတာတွေ လုပ်ပါတယ်”
ပြန်ကြားရေးနဲ့ ပြည်သူဆက်ဆံဦးစီးဌာနရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲထွဋ်ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားတာ ပါ၊
ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်ထဲက ကျောက်နီမော်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကိုရော စစ်တွေမြို့ ရဲစခန်းရှေ့ မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေကိုပါ ဇွန်လ ၄ရက် ည(၈) နာရီအစိုးရ သတင်း တွေမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ သလို ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်း ဖော်ပြပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြသနာတွေကိုအစိုးရက တရားဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ အစီ အစဉ် တွေ ကို သတင်းစာတွေမှာရော ရုပ်သံနဲ့ ရေဒီယိုတွေကပါ ဖော်ပြနေပြီး အေးချမ်းမှုနဲ့ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို ထိခိုက်မယ့် အပြုအမှုမျိူးကို ရှောင်ရှားဖို့နဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ နေထိုင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ဆိုတာကို လည်း အထူးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီး အဲဒီ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
သဂျီးမင်း ငယ်ငယ်တုံးက ဘယ်လိုခေါ်ခဲ့လဲသိချင်သား
ကျနော်တော့ သူတို့ကို ဖော်ရိန်နာတွေလို့ ခေါ်တယ်
အစုအဝေးလိုက်တွေ့ ရလေ့ရှိတဲ့ ဖော်ရိန်နာတွေပါ… တာမွေမှာက ဗလီများတာကိုးးးးးး
တို့ ဗုဒ္ဓဘုရားကလည်း ကုလားအစစ်လိုပြောလို့မရဘူး .. တရားတော်တွေထဲမှာ ကြားဖူးတာပြောတာ…
အသားမဲတဲ့ လူတွေကို ဘုရားရှင်လက်ထက်က ကာလ ဆိုပီးခေါ်ကြတယ်ဆိုပဲ ..
အဲကနေပီးတော့မှ ကာလ ကာလ ကနေ ကလား ဖြစ်သွားတာတဲ့…
ကလားကတော့ အသံထွက်ဖြစ်မှာပေါ့ ..စာနဲ့ အရေးကြတော့ ကုလားဖြစ်သွားရော တဲ့ ..
ဗိုလ်ချူပ်ပြောခဲ့သလို သောက်ကျင့်တွေ ပြင်ကြပါ။ သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ရေးကြပါ၊
ဝေလေလေနဲ့ ထင်ရာတွေကိုပြော ထင်ရာတွေကိုရေး နေရင် တိုင်းပြည်အတွက် အမှိုက်တွေပါ။
ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် အာဇာနည် တွေထဲမှာ အားလုံးပါကြပါတယ် သတိရကြမှာပါ။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရန်အတွက် လက်တွေလိုနေတာပါ။ ပါးစပ်တွေမဟုက်ပါဘူးကွာ။
၈နစ်ရှိပြီ ငါစောင့်နေပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကိုတစ်ကယ်တိုးတက်စေချင်လျှင်
မည်သည့်ဘာသာမဆို မျက်လုံးမှိတ်ပြီးမကိုးကွယ်ပါနှင့်ဘာသာဆိုတာ ယုံကြည်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့အတွက် ဘာသာပြောင်းတိုင်း လူမျိုးပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်နေသမျှ ဒို့ဗမာတွေအလိမ်ခံနေရမှာပါ။
လူသားအကျိူးပြုဂီတဥယျာဉ် (၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈)
ဒို့ဗမာတွေ ဘယ်လောက်ပြုပြင်နိုင်မှာလည်းတော့ မသိပါဘူး၊အသိနှင့် လုပ်ရပ်တွေလွဲနေပါတယ်၊
ရီစရာမဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို မတော်တဆ တိုက်မိခဲ့လျှင် နိုင်ငံခြားသားက ဆောရီးတဲ့၊
ဗမာက မင်းဘာကောင်လည်းဆိုပြီ ရန်ဖြစ်ကြတယ်၊
နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်ကို အရမ်းလှတယ်လို့ ပြောလျှင် နိုင်ငံခြားသူက သိုင်းကျုးတဲ့၊ဗမာသူက ပါးကျိုးမယ်၊
့ဟိုဟာစားတဲ့လေ……….အြော် ဒိုဗမာတွေ ရှက်စရာကြီးကွာ။
တာမွေလူမိုက်ကြီး ၀င်းကိုလှိုင် (၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈)
In my opinion, Muslims do not like to be called “Kalar” especially because of the expression & tone of the user used. It mostly carries the tone of hatred. So, Muslims generally feel insulated when this word is used against them. Nobody wants to be hatred, don’t we?
ကုလားမို့ ကုလား ခေါ်တာလေးများဗျာ… တရုတ်မွတ်ဆလင်(ပန်းသေး) တွေကို ဘယ်သူတွေက ကုလားလို့ ခေါ်နေလို့လဲနော်.. ဗမာမွတ်ဆလင်၊ ကုလားမွတ်ဆလင်၊ တရုတ်မွတ်ဆလင်၊ ရှမ်းမွတ်ဆလင် .. အိုဗျာ.. အများကြီးအများကြီး.. ကုလားလို့ခေါ်နေတာက လူမျိုးကို ခေါ်နေတာပါ.. မွတ်ဆလင်လူမျိုး၊ ခရစ်ယာန်လူမျိုး၊ ဗုဒ္ဒလူမျိုးရယ်လို့မှ မရှိတာကို.. နော့လေ…
မဟုတ် အာရဗ်သင်္ဘာများပျက်ပြီးရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သလို ရခိုင်မင်းများလက်ထက်တွင်လည်းပြည်
စော်ကားသလို့မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ၊ကိုယ်ကိုးကွယ်နေရတာလဲ အဲဒီကဘုရားပါဘဲ . .သတိတော့ထားပြီးပြော
ကျုပ်ထင်တာတော့ ဒေသခံမိန်းမတွေကို ယူပီး သူတို့အယူ စဖြန့်တယ်ထင်တာပဲ။
လိုအပ်ရင် ခင်ဗျားရဲ့ ကြောင်တပ်ဖွဲ့ခေါ်ဗျာ။
အမိုက်စား ကြောင်တပ်ဖွဲ့ထဲ ၀င်ချင်ဒယ်(ဒါတ်ဘုံဒွေကြည့်ရဒယ်)
ကျုပ်က RPG ကိုင်တဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ကြောင်ပဲလုပ်မှာနော်…
အားလုံးရပ်လိုက်ပါတော့၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို အပြစ်ဒဏ်အတိအကျခံ ချမှတ်နိုင်ဖို့သာ ကူညီကြပါ။ ဒီအသုံးအနှုန်းဟာ ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားကြပါ။ ကုလားလို့ခေါ်ပေမယ့် အားလုံးဟာ နိုင်ငံတိုးတတ်ရေးအတွက် အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါပဲ။ ကျုပ်အမြင်အရတော့ ကျုပ်တို့ဟာ ဘာသာခြားတွေဖြစ်ပေမယ့် ဒီနိုင်ငံမှာ အတူနေထိုင်လာကြတာကြာပါပြီ။ ဟိုအရှေ့ဘက်က ခွေးတိုးပေါက်ဟပေးလိုက်လို့ ၀င်လာတဲ့ ပေါက်ဖော်တွေထက်တော့ ကျုပ်က ကုလား(အခြားစကားလုံးရှာမတွေ့လို့ပါ )တွေကိုပိုချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာတော့ အရမ်းကြီးအစွန်းမရောက်ဘဲနဲ့ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဓလေ့ထုံးစံနဲ့ ကိုက်ညီအောင် နေထိုင်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
dd dardar says:
ဘာပဲပြောပြော တို့ကတော့ ဗမာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဗမာမ လို့ခေါ်ရင် ကျေနပ်တယ်…….ကြိုက်တယ် ဗမာဖြစ်ရတာကို
ဒါပေမယ့် ဘာလို့ကုလားတွေက ကုလားလို့ပြောရင် မကြိုက်တာလဲ
စဉ်းစားလို့တောင်မရဘူးဗျို့ ……. ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာနဲ့ လူမျိုး
ကို ကိုယ်မှမချစ်ခင်မလေးစားဘူးလား … တကယ်ကျေနပ်တယ်
အစ္စလာမ်ဘာသာကိုတကယ် နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ကုလားလို့ခေါ်တာ
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်က စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။ ပန်းသေး တွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ရောက်လာ ခဲ့တဲ့ သမိုင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီးရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ ကုလား ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ဘယ်က စ ခဲ့လဲလို့ မရေးထား ပေမယ့် မြန်မာ ဘုရင် ဘိုးတော် ဘုရားလက်ထက်မှာ ကုလား အမျိုးအစား ၁၀၀ နီးပါးလောက်သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဘာသာနဲ့ ခွဲခြား တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ၊ ကုလားဖြူ၊ ကုလားနီ၊ ကုလားဒိန်၊ ကုလားနက်၊ ကုလားပထန်၊ ကုလားပန်းသေး၊ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
အဲဒီမှာ ပန်းသေး ကိုလဲ ကုလား စာရင်းထဲထည့်ထားတာတွေ့ တယ်။ ကျွန်တော့် အထင်က တော့ ကုလား ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံ အနီး အနားမှာ တွေ့ ရတဲ့ ရုပ် မျိုးမဟုတ်တာကို ဆိုလိုတာထင်တယ်။ အမှန်တော့ ပန်းသေး ရဲ့မူရင်း ပုံသဏ္ဍာန် ကလဲ တရုပ်နဲ့ မတူဘူး၊ နောက်ပိုင်းတရုပ်လူမျိုးတွေနဲ့ သွေးနှောသွားပြီး တရုပ် ပုံ ပေါက်သွားတာ။ ပန်းသေး ရဲ့မူရင်း ပုံသဏ္ဍာန်က အရင် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ရဲ့အရှေ့ ပိုင်း ဒေသ က ကာဂျစ်၊ အဇာဗိုင်ဂျန်၊ တာဂျစ်ကစ်စတန် တို့ နဲ့ တူတယ်။ အသားဖြူ တယ် အရုပ်မြင့်တယ်၊ ဆံပင် မီးခိုး၊ မျက်စိ မီးခိုး ရောင်မျိုး။ ဒါကြောင့် ကုလား ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက ဘာသာ၊ အသားအရောင်နဲ့ မဆိုင်ဘူးထင်တယ်၊ ပြိတိသျှ ကိုတောင် ကုလားဖြူလို့ ခေါ်ခဲ့ကြတာပဲ။
ဒီနေ့ပဲ အဲဒီအကြောင်းကို မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပြောဖြစ်ပါတယ်။
”ကုလားတွေက ကုလားလို့ အခေါ်မခံချင်ရင်ငါကတော့ မခေါ်တော့ဘူး (ခွားကလေး)
ဆန္ဒပြသူတွေပုံကြည့်ရတာလဲ ဦးထုပ်ဖြူစောင်း၊မုတ်ဆိတ်တွေနဲ့ အသားမည်းမည်းကောင်တွေပါဗျ။
အဲလိုလူတွေမှ ကုလားလို့မခေါ်စေချင်မှတော့ ကျွန်တော်လဲ (ခွားကလေး) လို့ပဲခေါ်တော့မယ်။
စိတ်မဆိုးနဲ့ ကုလားလို့မှ မခေါ်တာနော။
အင်း ကျွန်တော်ကတော့ ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်…ကုလားလို့ ခေါ်တာမကြိုက်တဲ့ ကုလားတွေကို ပီချေး လို့ပဲခေါ်တယ်…
တက်ပုလို့ခေါ်တာမကြိုက်လို့ ရပ်ကွက်ထဲ ဘိန်းမုန့်ကျွေးပြီး နာမည်ပြောင်းကာမှ
ဘိန်းမုန့်တက်ပုဖြစ်နေမှာ စိုးရသေး၊ အဟေးဟေး…